ဂျော့ခ်ျ Flat Cap သင်ခန်းစာ
ဇူလိုင်လ 17, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ကလေး, ကလေးများ, Menswear, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
George Flat Cap Tutorial Images are available in the pattern download. လှမ်း 1 5mm seam allowance included Cut out all the pattern pieces. မာကုအချက်များက, ချုပ်ရဲ့မှိုကိုအသုံးပြုပြီး TOP နှင့်ဘေးထွက်အပိုင်းပိုင်းအပေါ် B နဲ့ C, မြေဖြူတွေသုံးပြီးဒါမှမဟုတ်အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကလောင်. သငျသညျ interfacing အသုံးပြုလိုပေမည် (အပေါ်သံသို့မဟုတ်ချုပ်) […]
မေ 17, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ပစ္စည်းများ, ကလေးများ, Menswear, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. Begin by cutting the INNER CAPE then trim to the dashed line to cut the CAPE TRIM. You may choose to trace off the CAPE TRIM section so you can use the INNER CAPE pattern for future use. Pin and stitch OUTER HOOD 1 pieces to the […]
လိုအပျ pattern စမ်းသပ်သူများသို့ - Bella ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွ pattern Update ကို